Muvhuro 27 Gunyana 2021
Chikunguru 21, 2018
Muzvare Jessie Majome Votsvaga Rutsigiro Rwekuti Varambe Vachishanda neVagari vemuHarare West
Muzvare Jessie Majome vanoti vari kutsvaga rutsigiro kubva kuvagari vemuHarare West rwekuti varambe vachishanda semudare wavo kana vakakunda musarudzo dzichaitwa kupera kwemwedzi uno munyika. Muzvare Majome vanoti vari kupinda mukwikwidzo idzi vakazvimirira. Nyaya ina Marvellous Mhlanga-Nyahuye.
Chikumi 24, 2018
Vamwe Vokurudzira Kusimbiswa kwekuChengetedzwa kweMutungamiri weNyika
Dzimwe nyanzvi dzechiuto dzinoti kuchengetedzo kwemutungamiri wenyika hakuna kusimba sezvinotarisirwa nekuti vanochengetedza vacho havana ruzivo nekudzidziswa basa iri zvakadzama sezvo vakawanda vavo vari vechiuto.
Chivabvu 28, 2018
VaThemba Mliswa Votaura Pamusoro Pekukundikana KwaVaRobert Mugabe Kuenda Kuno Mira Pamber peKomiti yezveMigodhi
Vaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, avo vanga vachitarisirwa kumira pamberi pekomiti yezvemigodhi, vanokundikana zvakare kuenda kudare reparamende kuti vanopa humbowo pamusoro pemari inoita mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora yakabva mukutengeswa kwemangoda yavakati yakatsakatika.
VaChristopher Mutsvangwa Vanoti Vachakunda VaTemba Mliswa Musarudzo Dzeku Norton
VaChristopher Mutsvangwa vanoti vachakunda VaTemba Mliswa sezvo VaMliswa vakayamurwa nenhengo dzeMDC-T nevaimbove varwi verusununguko kuti vakunde. Nyaya ina Arthur Chigoriwa.
VaChristopher Mutsvangwa Voramba Mashoko Ekuti Vakatyisidzira VaLangton Mutendereki
VaChristopher Mutsvangwa vanoramba mashoko ekuti vakatyisidzira VaLangton Mutendereki kuti vabude musarudzo dzemaprimary ebato reZanu PF kuNorton. Nyaya ina Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe Democracy Institute Yodzidzisa Veruzhinji Kodzero Dzavo
Sangano reZimbabwe Democracy Institute, ZDI, riri kutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva iyo nyika iri kugadzirira sarudzo. Mumwe apinda muchirongwa ichi, Muzvare Mildred Muzanechita, vati vavhurika pfungwa dzavo mushure mekuwana dzidziso yavapihwa.
Madzimai eVashandi vekuHwange Achiratidzira muHarare.
Zimbabwe Electoral Commission Yokurudzirwa Kushambadza Kuongororwa kweGwaro reVavhoti
VaZivanai Muzorodzi veCommunity Tolerance and Reconciliation Development vachitaura nezvekunonoka kushambadzwa kwechirongwa chekuongorora gwaro revavhoti.
Mumwe Mudzimai weChidiki wekuNewYork Anove Chizvarwa cheZimbabwe Anoti Hazvisi Nyore Kuita Basa Rekutora Nhau seMudzimai
Mumwe mudzimai wechidiki wekuNewYork anove chizvarwa cheZimbabwe achishandira bepa nhau reNew York Times muzvare Wadzanayi Mhute vanoti hazvisi nyore kuita basa rekutora nhau munyika isiri yako uye uri munhukadzi. Muzvare Mhute vanoti vanotoshanda nesimba kuti vawane ruremekedzo pabasa.
Dzimwe Nhengo Dzebato reZanu-PF kuChegutu neMhangura Dzoratidzira
Dzimwe nhengo dzebato reZanu-PF kuChegutu neMhangura dzakaratidzira nemusi weSvondo dzichiti hadzisi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemaprimary mubato iri. Nyaya ina Arthur Chigoriwa.
VaNelson Chamisa Voita Musangano muBritain
Mutungamiri wechimwe chikwata MDC-T VaNelson Chamisa vakaita musangano nemusi weSvondo paJubilation Centre, Bedford kuBritain nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. VaChamisa vakaudza vanhu ava kuti vanofungidzira kuti pane hurongwa hwekuda kubirira sarudzo uye havasi kuzorega izvi zvichiitwa.
MDC-T YaVaNelson Chamisa Yoita Musangano muBritain